Oromada iyo Soomaalida Qaad wax ka weyn ayaa ka dhexeyaa! | Gabiley News Online
Oromada iyo Soomaalida Qaad wax ka weyn ayaa ka dhexeyaa!
1. Labada Qoomiyadood waxa ay wadaagaan xuduudda ugu dheer gobolka oo lagu qiyaaso 1,400km, taas oo haddii deegaan ka mid ah colaadi ka aloosanto ku baahaysa.
2. Maadaama oo ganacsiga Soomaalidu furfuran yahay suuqyada ugu waaweyn ee ay badeecadahooda u iib-geeyaan waa gobolka Oromada.
3. Xoolaha loo Iib-geeyo dalalka khaliijka, tiro badan oo xoolaha Oromada ah ayaa ku jira, gaar ahaan lo’da.
4. Maadaamaa oo Soomaalidu tahay xoolo-dhaqato, Oromaduna waxa ay u badan tahay beerallay, sidaas awgeed, calafka xoolaha, khudaarta iyo Jaadkaba waxa laga keena dhulkooda. Sidoo kale, xilliyadda abaarta Soomaali badan ayaa xoolahooda u tallaabiya dhulka Oromada.
5. Soomaalidu marka ay Itoobiyada kale, gaar ahaan caasimadda Addis Ababa oo hawlo badan kaga xidhan yihiin u safrayaan waxa ay sii maraan dhulka Oromada.
6. Oromadu marka ay culays dhaqaale iyo abaaro la kulmaan waxa ay gabbaad ka dhigtaan dhulka Soomaalida. Haddii ay tahriibayaanna waxay maraan dhulka Soomaalida.
7. Waxa jira Soomaali badan oo xaasas Oromo ah leh, sidoo kale, waxa jira Oromo badan oo xaasas Soomali ah leh.
8. Geeska Afrika waxa uu noqday deegaan ay colaadaha iyo abaartu ku soo noqnoqdaan, taas oo dhaqaale ahaan, caafimaad ahaan iyo aqoon ahaabba diciifisay qoomiyadaha degan.
9. Waxa kale oo ay labada qoomiyadoodba wadagaan ‘diinta Islaamka’, maadamaa oo ay Oromadu u badan yihiin dad muslimiin sunni ah, Soomaaliduna ay dhammaantood yihiin Muslim sunni ah.
10. Dalalka Khaliijka oo ah meelaha ganacsigeena aynu ka keensanno ama soo marino waxa ka jira khilaaf siyaasadeed sida khilaafka xulafada Sucuudiga iyo Qadar iyo dagaalka Yemen. Sidaas awgeed, haddii collaad cusub ka bilaabanto dhinaca Itoobiya saamayn weyn ayay ku yeelanaysaa qoomiyadahan gaar ahaan Soomaalida.